UMoya woTyelelo loMoya
Ukuboniswa, Isikhokelo, kunye neendwendwe
Iimpawu Zomoya Wezilwanyana:
Ngaba uye wavakashelelwa ngumoya wempuphu ebomini bokwenene, ngexesha lokucamngca okanye ebusuku ? Uluhlu apha a mabali akwabelwana ngabafundi bethu abathintela ukudibanisa kwabo ne- totem yeengcuka .
~ Ndingaba ngu-50 kwaye akukho nto ebomini bam ndiye ndabona imvu ephilileyo, kungekhona nakwi-zoo. Nangona kunjalo, ndiye ndathandwa yiimpungulu ukususela xa ndathi "ingcuka" kwaye ndiye ndawafunda ngaphezu kokungaqhelekanga ngokukhawuleza. Ewe, ngobusuku bokugqibela malunga nobusuku bobusuku, ezitratweni zaseMilwaukee, intombazi enhle imvu yasendleleni esingaphambi kwesitrato phambi kwam ukuya kwinqwelo yokupaka iilori. Kwakumnyama kwaye akukho namnye owawujikelezile kodwa ndanciphisa ukuya kwi-5mph kwaye ubu buhle buye butyhutyha kwi-trot kwaye bujika bukhangele ngqo kum. Andizange ndikholelwe am amehlo. Savalela ukukhangela oko kwakubonakala kungunaphakade. Ndaziva ngathi le ngcuka yayinento into endandixelela yona kwaye ndandicinga ukuba ndiphume emotweni kwaye ndiza "kuye" kodwa ke itekisi yafika kwaye yahamba. Ndisaqhaqhazela. Ndijongene nomcimbi onzima kulo nyaka odlulileyo kwaye ndandiva ngathi ndixelelwa ukuba intuition yam iyindawo kwaye ixesha lifikile ukuba ndivuke kwaye ndiqale ukuba ngubani ndifanele ukuba. Ndithi kuni, bekuyi-AWESOME!
~ Ndandinxulumene ngokomoya kunye neengcuka ngenxa yokuba ndandincinane kakhulu. Ndahamba kunye nootatomkhulu xa ndandineminyaka engama-4 okanye emihlanu ubudala kwaye ndalahleka, ekugqibeleni ndiqhubela ipakethe yeengcuka zeengodo eziye zandidla ngokukhawuleza kum. Into endiyicinga ukuba i-alfabhinqa yema phambi kwam kwaye yaqalisa ukungcikiva njengokuba yayihlambulula ukungcola endandikujonga ngathi ndiza kuhlamba. Emva kokuba ootatomkhulu bafumene apho ndiyizimpisi ezishiywe ngaphambi kokuba oogogo nabazali bababone . Kodwa ukususela ngelo xesha ndibone imvu emhlophe ephantse ikhulile kunye nam kusuka kwidlwane ukuya kumdala omdala mna namhlanje. Uqhaqhawuleza uthetha kum kodwa sinoxhumo olusondeleyo lwengqondo oluvumela ukuba ndiqonde oko azama ukukuxelela. Undincede ngamanye amaxesha anzima kodwa uye wandinceda ndizive ndiphantse kwiMhlaba, kwihlabathi leMoya kunye nelifa lami laseCherokee. Utata wam wayesoloko endixelele ukuba ndineendwendwe kodwa ndagxotha umoya wezimvu, onyulu kwaye wayeqiniseke ngokuqinisekileyo.
~ Ndahlala kule ndlu iminyaka embalwa. Uninzi lwepropati kunye nemithi emihle, i-bush, njl. Njalo ngexesha elinye ndithatha umfanekiso ngaphandle, kwakuya kuba nemithunzi epheleleyo okanye iimbonkco. Andizange ndibe nantoni na into enje ebomini bam.
~ Ndiyi-16, kwaye ndiyinxalenye yamaNdiya. Ndisoloko ndixelelwa ukuba umkhokeli wam umoya ingengcuka kodwa andizange ndikholelwe kude kube kuhlwanje. Ndaye ndikhwele ekhaya lebhasi ukusuka esikolweni kwaye ngasecaleni kwendlela ndabona imvu enkulu emhlophe ebusweni obumnyama, kwaye kwakubonakala nje kum. Ndabuza umntu ondizungezile ukuba wayibona, kwaye bonke bathi akukho. Emva kwemizuzu engama-10 kamva, ndabona kwakhona, ecaleni kwendlela nje ehleli apho ndikhangela, ndiphinde ndabuza abantu, kwaye baphendula ngeempendulo efanayo. Ndabona elinye ixesha ngaphambi kokuba ndifike edolophini, kwaye kwakukho ecaleni kwendlela yokulila, kwaye akukho mntu wayivile kodwa mna. Ndakuva ngebhasi, kunye nomculo kwibhasi, kwakunomvakalelo onzima. Ndiyazi ukuba iya kubuya.
~ Xa ndisemncinci, ndiza kubona ingcuka eyimnyama ihamba nayo yonke imihla xa ndilala. Azange akhuphe okanye aphule amazinyo akhe. Kodwa wayehlala ehlala ebudeni bam. Ndiyi-18 ngoku kwaye ndiyabona. Ndizamile ukuthetha ingcuka kodwa wayeya kukhangela phezulu kwaye ahlasele emthunzini. Ngenye imini ndahamba emaplanga ngendlu yam kwaye ndafumana ingcuka emnyama. Ndandiqhaqhazela, ndicinga ukuba wayeya kundihlasela, kodwa endaweni yoko, sasivalela amehlo kwaye ndaziva ndixhamle kule ngcuka.
~ Ingcuka emnyama yadlula phambi kwam. Ndayeka kwaye ingcuka yajika yajonga kwamehlo am. Kwakuyimilingo .
~ Ukususela ekubeni ndiseyingane ndandinxibelelana ngokukhethekileyo neengcuka. Ngethuba lohambo kunye ne-Boy Scouts ndaye ndaye ndaye ndaza ndahamba nabo bonke abantu, ngaloo busuku ndandivuswa yiindlovu ezenza i-camp site yethu. Andizange ndijonge kubo bonke kodwa ndibe nomzuzu ongumoya wokomoya kunye noko ndinokuyicinga ukuba yi-alpha yepakethi. Wahamba ngokwenene waya kumda weenyawo zam waza wama nje wamjonga. Kwakubonakala ngathi lixesha elihle sasijonga nje, siqonde ngokupheleleyo. Ndiyazi ukuba ukukhangela ingcuka kwamehlo enzima kodwa akukho mngeni, ukukhupha okanye nantoni na evela kuye. Emva kweminyaka embalwa, 'imibono emincinci' yanda kakhulu kwaye yaxhaphaka. Ndabona izinto ezifana neentlekele zemvelo kunye neziganeko ezibangele ukulahleka okukhulu kobomi. Ndisaba 'nezipho.' Ndifumene emva kophando olwenzekayo kwintsapho yam, le mibono. Ndonwabile kukuba ndifumene isilwanyana sam somoya, empeleni, ingcuka.
~ Ndandineminyaka engama-4 ubudala. Ndandijongene neNyakatho ukuya kwi-bluff ephezulu emlanjeni, kwaye ukuba unemi bluff ekwindla, uza kubona idolophu yaseChillicothe, uShawnee ye "dolophu enkulu." Ephantse kwindlela yokuhamba, ndabona ifom enkulu, emnyama. Kwakubonakala ngathi ingcuka okanye inja enkulu eyayibukeka njengengcuka. Andizange ndive noloyiko kwisilwanyana kwaye ndayilubonisa ngokucacileyo. Ndabona ukuba ndikhangele, kwaye yagijimela kum. Kwakukhawuleza ngokukhawuleza. Ukucatshukiswa kwam, uboya balo buqala ukuhamba emhlophe. Ndaqala ukuziva ndinoyikima kakhulu kangangokuba andinakukukhupha iinyawo zam emhlabathini, okanye ndikhwaza. Kwaye malunga ne-100 ft kude nam yaye konke kwakumhlophe, kwaye amehlo ayo abomvu kwaye agquma njengama-embers. Ekugqibeleni ndakwazi ukugijima, kwaye ndathabatha emilenzeni yam encinci ndaza ndaya e-trellis ndavuka kwinqaba elingaphambili lomoya. Ndandiyicala kwinqanaba langasekhohlo kodwa andizange ndiyihlambe. Ndamemeza umama waza wawaleka. Kwakumnyama xa efika khona. Ndine-markmark yokuzalwa njengenja ye-dog apho yandiba khona.
Ubukho / Isikhokelo
~ Ukuba kwakungengenxa yemimoya emhlophe neyimvu ndingayi kuba apha namhlanje. Ndanduluka ngaphaya komzi ngenye imini kwaye kwafuneka ndilinde umqondiso we-crosswalk ukutshintsha ukuwela isitalato. Ndandisoloko ndilinde ekhoneni, kodwa into endibuyisele ekhoneni ngenxa yokuba imoto yagijima ibomvu ebomvu eyayingazange iphendukele ekhoneni elibomvu. Ukuba ndandimi apho ndiza kubethwa yimoto kwaye mhlawumbi ifile kuyo. Ukuba bekungenxa yabo ndiza kuhamba nabantu bezulu. Ungalokothi uloyike imimoya yethu yezilwanyana .Abakho ukukunceda ebomini bakho kwaye banike isikhokelo.
~ Xa ndivakalelwa ngumoya wohlobo oluthile ndifumana intshukumo. Ngako oko, ndifumana ezininzi izinto. Ngamanye amaxesha ababi ngamanye amaxesha abayikho. Xa bebubi ndibiza umnxeba womoya, iNyanga kunye nentombi yakhe / i-Kekela (iMlambo ngeelwimi zeengcuka). Inqaku liyilo, bandikhusela kwaye andinakuhlala ngaphandle kwabo.
~ Ndiyiminyaka elishumi elinesithathu ubudala. Ndimncinci, ewe, kodwa utata wam uyingxenye yeCherokee kwaye ndifuna ukudibanisa nelokuzalwa kwam. Ngenye imini ndaqalisa ukuphanda ngezilwanyana zeMoya ngaphandle. Ndandisoloko ndiziva ndixhunyiwe kwiindlovu. Ngoko ndazama ukufumana isilwanyana sam. Ndaya kumbhede wam ndaza ndalala. Ndivale amehlo kwaye ngokukhawuleza ndahlala phantsi ekhephu, ndilindile. Kungekudala ngeqhwa elikhulu ndibone ingcuka ihamba kum. Wayeyindoda enhle emhlophe kwaye emhlophe entanyeni yakhe, Wayenxibe indlebe ngeentsiba zokhozi. Wayemangalisa. Ndambuza wathi "Liliphi igama lakho?" Waphendula ngokuthi "Kindra." Ndatshwenyeka kuba ndacinga ukuba ndiyicinga kodwa andizange ndenze lelo gama. Ndakhangela ngqo amehlo akhe aluhlaza, ndaziva ndikhuselekile kwaye ndikhululekile. Ndamxelela ukuba ndimele ndihambe kwaye wayebukeka "edabukisayo" wayethetha. Kwaye sahamba iindlela zethu ezahlukileyo. Ndavula amehlo kwaye ndavakalelwa nje ngokuba ndikhona nomntu engazange ndidibane naye kwaye ndenza umsebenzi omhle ngombono wokuqala.
~ Ekude ndikhumbule nanini na into ephazamisayo okanye yayifunekayo ukuba ndiqonde isiganeko ebomini bam isilwanyana sezilwanyana kunye neempuphu zayo ziza kubonakala ngamaphupha am, ngokuqhelekileyo kwintsimi yengca enqabileyo, xa ndandimncinane kunzima kum kodwa ngoku kuza kum okhalweni. Kwiminyaka yakutshanje ndibone imibono yenkomo yesifazane, ebizwa ngokuba ngu-Amoriki, kunye nomntwana wakhe ngaphandle kwamaphupha am. Ngenye imini xa ndilele embhedeni ndivakalelwa kwaye ndiva isilwanyana sase-Amorak siwela phezu kombhede wam, apho elala khona ecaleni kwam ubusuku.
~ Ndiye ndiziva ndixhamla kwiimpisi kuba nje ndiyakhumbula. Ndiyakhumbula ngokukrakra xa ndincinci kodwa ngelixa ilizwi lam lahla ngexesha lokukhulelwa, ndilahlekelwe yikhono lokulila njengokuba ndisebenzisa. Andizange ndive ndiyimfuneko yokuba ndifune ukukhokela kwomoya ngaphambi kokuba kutshanje. Ngosuku lokuqala ndagqiba ekubeni ndiyifumane, ndaphupha ukuba ndaguqulelwa ingcuka emnyama ngumdala ongaziwayo kwaye ndinepakethi kunye nam. Ndingu-alpha yabo. Kwakungomnye weemvakalelo ezinkulu endinakho. Emva koko ndavuswa ndaqhubeka nokuphanda kwam. Emva koko ndafikelela kumoya wam ngokukhokela ngokucamngca kwaye wafika kum ngokukhawuleza kwangoko. Wayeyindoda emnyama ngamehlo aluhlaza kwaye ndaqonda ukuba ndimbonile ngaphambi kwam ebomini bam xa ndizama ukufikelela kwaye ndenza izinto ezinokucingwa njengeyingozi. Ndacinga ukuba yi-omen kodwa ke ndaqonda ukuba wayezama nje ukundikhusela. Ngoku ndifuna ukufunda kangangoko ndinako kuye kodwa ndiyakwazi ukubona igalelo lakhe ebomini bam.
~ Ndihlala ndiqonda ngokucacileyo ngomoya wam ukhokelo kwaye wayebonakala engowesilisa kwaye uthetha nam ngokuphantse njengengqondo yam engqondweni. Ngokucamngca, ndambona kungekhona kwimizimba yabantu kumaphupha am kodwa njengengcuka eyimnyama. Ndandinganqikazi kwaye ndinenkani ekuqaleni kwaye ndingafuni ukuya naye. Ingcuka ya ndijonga ngenyameko kwaye mna ndayimkhathaza. Iphupha liphindaphinda elinye ixesha kodwa ngeli xesha ndiyithemba kwaye ndilandele impisi ekhokelela kumhlathi kwaye ndibonise ukuba ndihambe phi. Ndangeniswa kwinqongqelo leengcuka kwaye kwakunomvakalelo wokhuselo n familiarity not afraid. Kwaye kwakhokelwa kwidwala idwala eliphakamileyo, apho ndabona khona ihlathi kunye nesibhakabhaka esicacileyo ebusuku, isikhokelo sam esimo somntu sasimi apho sijonge nje njengengcuka ebomvu ebomvu ngobuso obomhlophe kunye neliso eliluhlaza okwesibhakabhaka kwelinye icala. Kwakubonakala ngathi sibheke into ethile. Ndingathanda ukuba ndiyazi ukuba kuthetha ukuthini. Ndaziva ngathi ingcuka yayihamba kunye nam.
~ Ndiliphupha iiveki ezimbalwa ezedlule kwaye andinakukwazi ukugubha umlingo onayo. Iqala apho ndigijima khona kubantu aba-3. Ndiyazi ukuba bafuna kundenzakalisa kodwa ndibanjwe kakhulu ekuxhaseni ukuba ndiyonwabile ngokwenene. Bandixela kule ndawo evulekileyo apho ndikhawuleza ndize ndize ndijamelane nayo. Zihlala zihlala nganye kwimiyalelo, entshonalanga empuma naseningizimu, kwaye ndimi ngasenyakatho. Kuyinto engaqhelekanga kodwa ndiyazi ukuba i- winter solstice . Ndijonge ngamnye wabo kuthiwa ngabazalwana kunye nodadewethu kwaye ndibabonisa iintlanga zabo kwienkwenkwezi ezihlanganiswe ngaphezu kweentloko zabo. Ndiyatsho enye ukuba nguMeya omnye ukuba unguKherokee kunye nowesithathu ukuba ngu-Incan, kwaye mna mna ndingumthonyama waseMerika waseNdiya. Ukusuka apho ndiya kubuya endleleni yam kwaye ndiqhubeke ndigijima ngaphandle kokunditshutshisa, kwaye yilapho i-ingcuka yam iqala khona kunye nam endleleni. Into engaqhelekanga ndiyiNgesi yesiBhulu esineenwele eziluhlaza okwesibhakabhaka e-South African, kodwa ndivakalelwa kukuba ndinxulumene nala bantu.
~ Ndinephupha lokuba ndihambe ehlathini kwaye ndabona ingcuka yembusi iyahlahla umlambo. Ndayiphakamisa kwaye yayithetha nam ukuze ndiyibuyisele kwakhona ndiyiphinde ndiyiphinde. Xa kwakukho enye ke ngoko ndiyifumene xa iqela elikhulu ndiyazi ukuba umoya waguquka waba yingcuka ebomvu. Ndaziva ndithembeke ngoko ndathatha iipopu ekhaya kwaye xa ndenza ihlathi lafudula lisondela kwaye ndabona indlela eya kwelinye icala. Xa ndaya kuhamba ndabona imvula yayinzima kwaye apho ndandithatha ikhephu ngoko ndaya ekhaya kwaye yayikujikeleze indlu yam, kodwa kungekho egcekeni. Xa ndakhangela ndabona ifu elinomlambo ogelezayo. Emva koko ndabona ingcuka yafika kwaye yayisefomeni layo lemvu.
~ Ndineliphupha elifanayo kwiintsuku ezi-7, yimbusi emnyama. Ndiyindoda emnyama kwaye ndihamba emaplanga. Ndiyeke ndijonge ipapa yam yokuprinta. Ndiqhubeka ndihamba, ngoko ndibulawa ngento okanye umntu onomtsalane waseMerika wase-sibowl. Ndakujonga oko kuthetha ukuthwasa kwenyanga kunye nenkunzi yemfazwe, kwaye ke xa ndifile ndiyaduma kwaye ndijonge inyanga nenyanga zijika i-orange. Ngoku ndibona imibono yengqondo evela kule ngcuka okanye mna kwaye ndicinga ukuba ubomi bam obudlulileyo!
~ Ndinephupha elicacileyo ngokucacileyo. Ndandicacisa kwaye ndazi ukuba imithi yayisemva kwam. Kwakukho iqhwa emhlabathini. Iimbongolo ezimbini zaziza ziphuma ngaphandle kwamaplanga. Ngokwemvelo, ndazi ukuba babehlobo bam. Enye ingcuka yempuphu yayimhlophe ngamehlo aluhlaza okwesibhakabhaka, leyo yayingowesifazane. Enye ingcuka yempuphu yayimnyama ngeenyawo ezintle ezimdaka obuninzi, obengumfana. Ngandlela-thile, ndiyazi ukuba babengumzalwana nodade. Abantathu bethu badlala ndawonye ixesha elide, bahamba ngeqhwa. Ngesinye isikhathi, ndaye ndalala phantsi kwekhephu kwaye bobabini babekwe eceleni kwam, ngapha nangapha. Iphupha elo lenzeke malunga nonyaka odlulileyo, kwaye ndabona kuphela iipopu ukususela ngoko, kodwa ndivakalelwa ukuba zikhoyo.
~ Ndaphupha ubusuku obudlulileyo apho ndandisensimini kwaye ndava ukukhwela kwintsiba yenkcazo ende. Ndaphenduka ukuze ndibone ingcuka ekhangela kum nge-blue, yolwandle olumanzi, amehlo. Wandiqhayisa, kwaye ngandlela-thile ndaqonda ukuba wayethetha ukuthini, ndilandele. Ndamlandela, kwaye sasikule ndawo enkulu, indawo evulekile, nezakhiwo, bambalwa gqitha ukuba ndiyazi. Ndikhangele ngakwesobunxele sam, ukuba ndibone lo Mkhulu, uMnyama, umtsalane okanye into efike ngqo kuyo! Ingcuka yandibuyisela emqolo wayo yagijima. Njengoko siqhubayo ndambuza into eyenzekayo, waphendula i-oil spill, kodwa wayengazi apho. Wandixelela ukuba uthunyelwe ukukhusela nokunceda. Ingqungquthela yayiye yaphazamisa ngoku kwaye yaphela. Thina sibuyela endle. Ukuthetha. Wayethetha nge-yips kunye neentsimbi kodwa ngandlela-thile ndaziqonda. Uthe ndimele ndixelele umntu ngale nto. Ndaphendule ngubani oya kukholelwa ukuba ukuchithwa kweoli kuza kwenzeka ebomini bam kodwa mna? Wajonga buhlungu, kodwa wachaza igama, uRachel, umama womhlobo waza waphahlaka. Ndibona imvu rhoqo kwakhona. Ndingu-14.
~ Ndinephupha lokuba ndibone ingcuka emnyama kunye nentamo ende kunye nephuzi amehlo. Kwakunjengokubukeka kwisibuko, kwakuhleli phantsi phambi kwam. Ukuqhagamshelana kwamehlo, kwandula ndabona ukuba nguwe. Ndiyicinga ukuba umoya wam ukhokela ukuba ndiyingcuka emzimbeni womntu. Ndingomthonyama waseMerika kwaye ndidibene nabaninzi baseMnyama aseMerika. NdingumAfrika waseMerika.
~ Amaphupha endiyithandayo kakhulu. Ininzi yexesha iimbongolo zibukele kwaye zihamba ngasemva, kodwa ndikwazi ukuziva. Kwamanye amaphupha ami xa kukho umntu endiyaziyo, bahlala beba yingcuka. Kukho iintlobo ezahlukeneyo zeengcuka. Eminye imnyama ebomvu ngokumnyama kwaye ibe neminwe eluhlaza kwaye yayifana neengcuka ezibukeka zisongela kodwa zazinene kwaye zinoxolo. Kwakhona ndabona ezintathu iingcuka ezimi ebumnyameni, zibukele. Amabini anamehlo aluhlaza kwaye omnye unamehlo aluhlaza. Ephupheni ngombala obomvu obomvu, ndaguqula ibe yingcuka. Ndangumhlophe kwaye ndincinci emqolo nasembusweni wam, ngamehlo aluhlaza okwibhakabhaka. Phantse iveki edlulileyo sasiya esikolweni, ndiqhutyelwa esikolweni ngumama wam kwaye kwakukho ingcuka ecaleni kwendlela ehleli kunye nokubukela emotweni, kwakufana neyona nto ndajika ngayo. Ndiyiminyaka eli-13 ubudala eVermont kwaye ndifuna nje ukuba ndifumanise ukuba zithini iingcuka.
~ NdiseMoto obomvu, kwindawo ephantsi ehlathini kunye nabahlobo ababini. Ndijonge ngefasitela kwaye ndamangaliswa kukuba ndibona ingcuka enkulu emhlophe, kodwa iphinda ibuyele ehlathini xa ndiyibona. Emva koko, ipakethi yeengcuka ezingapheliyo, ezimhlophe-grey zivela ehlathini emgceni omnye. Ndivale umnyango weemoto kodwa abahlawulanga, endaweni yoko, bajikeleza imoto, bahamba ngeenxa zonke. Emva koko, ndiyabona amaNdiya ehamba kunye nabo. Ndijonge ngasemva kwizimpisi ezihle kakhulu, kwaye yilapho ndijonga ngayo amehlo. Babenhle, ngoko bekhumbula. Kwakufana nokujonga i-Niagara Falls ngokokuqala ngqa kwaye ndivakalelwa ngathi ndikhangele kwindalo yonke. Amehlo ayo afana neendwangu zokukhanya okuluhlaza ngokujikeleza abafundi. Andikwazanga ukusika igazi lam. Konke ngokukhawuleza, imoto iyaqala ukutshatyalaliswa kodwa ndandingqalelo kuphela kwiingcuka. Into endijikelezeyo iqala ukuguquka emhlophe kwaye ihle. Ndiqala ukuthambisa, kwaye ke xa ndivuka.
~ Ndiyi-14 xa oko kwenzeka kodwa ke ndilapha phakathi kwintsimi kwaye kwakukho inkungu. Ngomoya ndayiva imfazwe enkulu. Ndaye kwimbambano yehlabathi elidala lemfazwe II kwaye le mpuphu emhlophe iphuma ngaphandle kwaye ngenxa yesizathu esithile ndibe nesibongozo sokuyilandela, kwaye xa ndandenza ndaza kule ndawo evulekile kwintsimbi yentsimbi. Ingcuka yayilindele ngapha nangapha. Njengoko ndakhangela phantsi ndabona amanzi ahambayo ngoko ndawela umnqamlezo kwaye ingcuka yandihlasela. Emva koko, wema, wandijonga ke wagijima. Ndathetha kuWiccan kwaye wathi isilwanyana sam somoya sazincama ukuze ndikhusele.
~ Ephusheni lam ndibe ehlathini kwaye ndabona ezininzi iingcuka. Bandibukele kunye nenkokeli yabo yahamba yaya kum kwaye yangiphenduka yaba yindoda emhlophe ingcuka. Ndahlala nabo kwipaki labo lempisi.
~ Buye ubusuku obunye, ngelixa ndisebenza kwikhompyutheni yam ndaqalisa ukumisa. Ndandifunda ukuba yintoni umoya oqhelekileyo xa kwakusuka nje ingcuka yombala emhlophe ikhangele. Ndiyichitha, kodwa emva kweeveki ezimbini ndabuya ndabuya ndaza ndabona ingcuka kwakhona, Wahlala apho ekhangele kum. Ngeli xesha andinakukugxotha.
Imiyalezo kunye neentsingiselo ze-Wolf Totem
Amandla okuba neenjongo ezicacileyo
Indlela yokusebenzisa iPendulum
Funda ngoLwandle lweeLaleni kunye neendlela eziSebenza ngayo
Indlela yokulwa neCaffeine yakho
USirk Isaac Newton
Uluhlu lo kufunda
Isetyhula Ukubonisana Inkcazo kunye nemizekelo
UJack Kilby, uYise we-Microchip
U-Princess Olga waseKiev
Intlawulo yeentsizi (1828)
Iimifanekiso ezi-6 eziphambili ezisekelwe kwiincwadi zeRoald Dahl
10 Amalunga Nge-Argentinosaurus
IsiJamani kubaQaleli: Usapho lwam
Iingcaphuno zeNew World Brave
Isaziso soKhutshwa koBu-Independence
I-10 ye-Youth Best Baseball Bats Yokuthenga ngo-2018
Iimpawu zeeNgcaciso zomSebenzi zikhupha i-Ha-Ha
Ukusebenza neefoto zeGIF eDelphi
IAgasana College Admissions
NgeCawa yePentekoste nini?
Imfazwe Yehlabathi I: Imfazwe yaseTannenberg
Amazwi adibeneyo adibaniswanga Ukubhala nokuBhala
Iingcaphuno ezivela kwi-'Aeneid 'nguVil Virgil
Iingqungquthela: Ziziphi izinto, Indlela abazenza ngayo, Indlela abaphila ngayo
La Bella Principessa nguLeonardo da Vinci
Funda indlela yokwenza i-Chinese yogurt